परीक्षामा लेखिन् सरको इच्छा पास गर्नुहोस् वा फेल, कापी खोल्नुअघि नमस्कार: त्यसपछि जे भयो ! – Annapurna Post News
परीक्षामा लेखिन् सरको इच्छा पास गर्नुहोस् वा फेल, कापी खोल्नुअघि नमस्कार: त्यसपछि जे भयो !
June 1, 2022 sujaLeaveaComment on परीक्षामा लेखिन् सरको इच्छा पास गर्नुहोस् वा फेल, कापी खोल्नुअघि नमस्कार: त्यसपछि जे भयो !
काठमाडौं । कोरोना महामारीपछि विद्यार्थीको पढाइप्रति धेरै लापरवाही देखियो, कतिपय विद्यार्थीहरु निकै लगनशील भएर अध्ययन गर्छन् ।तर धेरै विद्यार्थीहरूको अवस्था यस्तो छ कि उनीहरूलाई परीक्षामा उर्तीण हुने आशा समेत हुँदैन् ।यस्तो अवस्थामा यस्ता विद्यार्थीले परीक्षामा अनौठो कुरा लेखेर आउँछन्, जसलाई पढेर कयौं पटक हाँस्न मन लाग्छ ।
तर कहिलेकाहीँ अचम्म लाग्छ, एक सानै विद्यार्थीले यो सब कसरी लेख्न सक्छ । प्राय सबै परीक्षामा यस्ता घटना देखिन्छन् । कुनै विद्यार्थीले उत्तरपुस्तिकामा रुपैयाँ राख्छ, कसैले उत्तरपुस्तिका जाँच गर्ने शिक्षकलाई उर्तीण गराइदिन अनुरोध गर्छन् ।
अहिले यस्तै एक विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल हुँदैछ । वास्तवमा ती विद्यार्थीले उत्तरपुस्तिकामा केही यस्ता कुरा लेखे, जुन पढेर सबै छक्क छन् ।
तपाईले यो तस्वीरमा देख्न सक्नुहुन्छ एक विद्यार्थीले आफ्नो उत्तर उत्तरपुस्तिकाको माथि ‘जय बाला जी’ लेखेका छन् । विद्यार्थीले प्रश्न र उत्तर नम्बरको साथ पहिलो पेज सुरु गरेका छन् । प्रश्नोत्तर नम्बर १ (क), जसको जवाफमा नायलान–६ः६ लेखिएको छ । यसरी सबै प्रश्नको उत्तर पेजको तलसम्म लेखिएको छ ।
रोचक कुरा के हो भने त्यसपछि उनले अर्को पेजमा अन्य प्रश्नको जवाफ लेखेनन् । यति भएपछि उनलाई आफू उत्तीर्ण हुने सम्भावना धेरै कम भएको महसुस भैसकेको थियो । त्यसैले विद्यार्थीले पहिलो पृष्ठमा उत्तरपुस्तिका जाँच गर्ने शिक्षकलाई एउटा सन्देश पनि लेखेर छोडदिएका छन् ।
उत्तरपुस्तिका अहिले सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल भइरहेको छ । मानिसहरुले निकै रमाइलो प्रतिकृयाहरु दिइरहेका छन् ।भाइरल भएको पेजमा विद्यार्थीले लेखेकी छन्, ‘चिट्ठी–चिठ्ठी जा सरकहाँ जा, सरको इच्छा पास गर्नुहोस् वा फेल, सरलाई कापी खोल्नुअघि नमस्कार ।’
त्यसको छेउमा उनले लेखेका छन्, ‘गुरु जी मलाई पास गर्नुहोस् ।’ यति मात्र होइन, विद्यार्थीले यो कुरा एक पटक होइन दुई पटक एउटै पेजमा लेखेका छन् ।यसैबीच, उत्तरपुस्तिका जाँच गर्दा, यो पढेर तपाईंजस्तै शिक्षक पनि छक्क परेको हुनुपर्छ । यो नेपालको नभई भारतको घटना हो ।
प्रसिद्ध धार्मिक स्थल चारधामको मुल केदारनाथमा १०२ जनाको मृ